के हो न्युरेएन्डोक्राइन ट्युमर, जो सँग लड्दै थिए इरफान खान ? — janadristi
के हो न्युरेएन्डोक्राइन ट्युमर, जो सँग लड्दै थिए इरफान खान ?
१८ वैशाख २०७७, बिहीवार ०५:४५
अभिनेता इरफान खान लामो समय दुर्लभ किसिमको रोगसँग लडे । आखिरमा उनले रोगलाई जित्न सकेनन् । कस्तो रोग हो त्यो, जसको अगाडि चिकित्सा विज्ञानको पनि कुनै जोर चल्दैन ?
इरफान खानलाई लागेको रोग थियो, न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमर ।
दुई बर्षअघि उनलाई यो रोग लागेको थियो । रोगको पहिचान र उपचार उनले लन्डनमा गरे । उपचारपछि पूर्णत ठीक नभएपनि उनी सामान्य लयमा फर्कने जोड गरिरहेका थिए । त्यसबीचमा एउटा फिल्ममा समेत अभिनय गर्न भ्याए ।
के हो न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमर ?
न्यूरोएन्डोक्राइन ट्युमुमर त्यस अवस्थालाई भनिन्छ, जुन अवस्थामा शरीरमा हर्मोन पैदा गर्ने न्युरोएन्डोक्राइन सेल्स सामान्य भन्दा बढी हर्मोन उत्पादन गर्न थाल्छ । एक हिसाबले यो शरीरमा अधिक हर्मोन बनाउने रोग पनि हो । त्यसैले यस ट्युमरलाई कारसिनौयड्स पनि भनिन्छ ।
अहिलेसम्म जतिलाई यो रोग लागेको छ, उनीहरुको पेनक्रियाजमा यो ट्युमर पलाएको देखिन्छ । तर, पेनक्रियाज शरीरको एक्लो ठाउँ होइन, जहाँ यो ट्युमर पलाउन सक्छ । यो ट्युमर शरीरको अन्य भगमा पनि फैलन सक्छ । जस्तो कि, फोक्सो, थाइराइड वा एड्रिनल ग्ल्यान्ड ।
सुरुवाती चरणमा यसको कुनै लक्षण देखिदैन । अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र उक्त रोगबारे पहिचान गर्न सकिन्छ ।
ट्युमर तीन प्रकारको हुन्छ
गेस्ट्रोइन्टेस्टाइल न्यूरोएन्डोक्राइन ट्युमर
यो गेस्ट्रोइन्टेस्टाइनल टै््रक्टकको कुनैपनि भागमा हुनसक्छ, जसमा ठूलो आन्द्रा र एपेन्डिक्स पनि सामेल छ ।
लंग न्यूरोजएन्डोक्राइन ट्युमर –यो फोक्सामो हुने ट्युमर हो, जसले खोकेको बेला रगत आउने वा सास लिन समस्या हुन्छ ।
पेन्क्रियाटिक न्यूरोजएन्डोक्राइन ट्युमर –यो पेनक्रियाजमा हुने ट्युमर हो । हर्मोनसँग जोडिएको कारण यस ट्युमरले ब्लड शुगरलाई एकदमै प्रभावित बनाउँछ ।
अब अर्को प्रश्न, यो ट्युमर कसरी हुन्छ ?
यसको कुनै निश्चित कारण छैन । अहिलेसम्मको स्थिती हेर्दा यो वंशानुगत रुपमा सर्दै आएको पाइन्छ । आमाबुवामा यस्तो समस्या भएमा बच्चामा पनि त्यो सर्ने संभावना हुन्छ ।
यसको अर्को कारण भनेको धुमपान र ढल्कदो उमेर पनि हो । साथसाथै कमजोर प्रतिरक्षातन्त्र पनि ।
यसका साथै अल्ट्राभायोलेट किरणले पनि न्यूरोएन्डोक्राइन ट्युमर हुने खतरा बढाउँछ ।
कसरी थाहा हुन्छ कि हामीलाई यस किसिमको समस्या छ भनेर ? यसको सामान्य लक्षण भनेको उच्च रक्तचाप, थकान वा कमजोरी हो । पेटमा समस्या भइरहनु पनि हो ।
यस रोगको कारण शरीरमा ग्लुकोजको मात्र एकदमै तिब्र बढ्ने वा घट्ने गर्छ ।
के हुनसक्छ उपचार ?
उपचारको कुरा ट्युमर शरीरको कुन भागमा छ भन्ने कुुराले निर्धारण गर्छ । साथै त्यो कुन चरणमा पुगिसकेको छ ।
उपचारको केही तरिका छन् । जस्तो कि, शल्यक्रियाबाट ट्युमर निकाल्ने । कहिले काहीँ दुई पटक पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । ड्रग थेरापी पनि दिइन्छ । यसमा किमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी र औषधि दिइन्छ ।
साथै रेडिएसन र लिभर डायरेक्टेड थेरापी पनि दिइन्छ । यो रोगबारे विश्व यति जानकार हुने थिएनन्, यदि स्टिभ जब्सलाई यो रोग नलागेको भए । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मास्टर माइन्ड मनिने स्टिभको मृत्युको कारण पेनक्रियाटिक न्युरोजएन्डोक्राइन ट्युमर थियो ।